~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: ကျမနှင့် ပေါက်တတ်ကရ(၁)
witch83 ( 18th March 2012 , 15:37 GMT+8)
Posted by witch83 at 1:54 PM
Thet Naing Tun March 19, 2012 11:52 PM
witch83 September 26, 2012 8:26 PM
Thank you, Gadone.
ကြည်ဖြူပိုင် January 26, 2013 10:38 AM
အဲ့သည့်နေ့ကစလို့ ကြိုက်သွားတာ ဒီနေ့ထိအသည်းစွဲပဲလား ?? :)
witch83 January 26, 2013 9:06 PM
Hahaha, အသည်းတော့ မစွဲပါဘူးကွယ်။ စားဖြစ်သွားတာပါ။ :P